Akhriso: Tobankan Buug Bisha November 2019 – Goobjoog News
“Haddii wax akhrintu tahay cuntada maskaxda, akhriso buuggaagta.” Marka aan jaamacadda joogo, weertaas waxaan u isticmaalaa in aan ku dhiirrigeliyo ardaydayda jecel akhrinta buugta si ay u sameeyaan horumar dhanka aqoonta ah. Si la mida, bahda akhriska jecel, iyagana waxaan kula talinayaa in bishan Nofembar ay liiska buug akhrintooda ay ku darsadaan tobankan buug:
Buuggan waxaan ku xusuustaa in uu ka mid yahay buuggaagta ugu caansan ee suugaanta Ingiriiska. Waa buug ku saabsan jacayl, waxaan aad uga helay hadalka furfurashada Jane Austen, “waxaa dhab ah dumarkoo idilna isku raacsan yahay in ninka dhallinyarada ah ee bishii hela mushahar fiican in uu u baahan yahay guur/xaas.”
Waa buug ka sheekeynaya jacayl ku bilowday ardaynnimo, dabadeed ku dhammaaday khiyaano. Kailyn iyo Daxon si lamafilaan ah ayay isku bartayn. Isku fasal ayay ahaayeen. Ka gadaal waxaa dhex maray jacayl markii dambe beenowbay.
North of Dawn waa buug xiiso badan. Wuxuu dhigayaa sheeko naxdin leh oo isugu jirta jacayl, daacadnimo iyo tallan haybeed qaran.
SIRTA GUUSHA by Xasan Mudane
Waa buug ka sheekeynaya guul iyo guuldarro. Wuxuu sahminaya macnaha dhabta ah ee guusha. Waa buug ay ku kaydsan yihiin sheekooyiin macquul ah, oo ku saabsan taariikh nololeedka shakhsiyaad ka guul gaaray ganacsi.
Waa buug ka sheekeynaya khiyaanada indheergaradka uu ka galo bushadiisa. Waa kuma indheergarad? Marka la eego Benda, indheergaradku waa qofka runta ku gabya, garabna u noqda dhibbanaha ama kooxda dulman. Waa buug cajiib ah! Oo wax iska weyddiinaya dowrka indheergaradka, waajibaadka saaran iwm.
Waa buuggii ugu dambeeyay ee uu qoray. Wuxuu diiradda ku saaray hab dhaqanka bini’aadamka iyo waxa dhiirrigeliya marka la joogo siyaasadda. Waa buug sharxaya fashilka fekerka libaraalka iyo dimuqoraaddiga, ee ku aaddan haqabtirka baahida bini’aadamka.
WQ: Hassan Mudane, Bare Jaamacadeed